Top News:-Intee la egtahay lacagta ka soo xarootay diwaan gelinta Musharrixiinta guddoonka Baarlamaanka? | Kobciye24.com
Top News:-Intee la egtahay lacagta ka soo xarootay diwaan gelinta Musharrixiinta guddoonka Baarlamaanka?
Guddiga diiwaan gelinta Musharrixiinta Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay magacyada iyo jagooyinka ay u kala tartamayaan 22 Musharrax oo ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya,kuwaas oo doonaya in ay qabtaan xilalka Guddoomiyaha Baarlamaanka,kuxigeenka 1aad iyo ku xigeenka 2aad.
Haddaba Musharrxiintaas waxaa laga qaadayay lacago kala duwan oo ay ku shubayeen Akoon Baarlamaanku ku leeyahay Bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Musharrixiinta u tartamayay Guddoonka Baarlamaanka ayaa laga qaadayay $15,000 oo Doollarka Mareykanka ah halka kuwa u tartamaya ku xigeenka 1aad iyo 2aad laga qaadayay min $10,000 oo Doollarka Mareykanka ah.
Lacagta hadda ka soo xaroortay 22kaas Musharrax ee xilalkaas u tartamaya ayaa gaareysa 240,000 oo Doollarka Mareykanka ah,waxaan Musharraxa marka uu lacagtaas ku soo shubo Bangiga ula imanayay Guddiga Warqadda caddeyneysa in uu lacagtaas bixiyay.
Xilka Madaxweynaha ayaa isaga ku laba jibbaarma lacagta ay isku diiwana geliyeen Ragga u tartamayay Guddoonka Baarlamaanka,waxaana Qofka noqonaya Madweynaha Soomaaliya uu isku diiwaan gelinayaa lacag dhan $30,000 oo Doollarka Mareykanka ah.